HomeAqoonta SariirtaU Gaar Ah Lamaanah: Samaynta Caafimaad Ee Uu Kulanka Sariirta Joogtada Ah Ku Yeesho Jidhka, Akhriso Xogan Muhiimka Ah.
Kulanka sariirta ayaa ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee Nolosha Guurka waana xidhiidhka muhiim ah oo ka dhexeeya labada qof ee is qaba waana Habka ugu haboon ee ay labada qof ku kancin karaan dareenkooda.
Laakiin waxa jira sharciyo loogu talagalay loona baahan yahay si kulanka sariirtu u noqdo mid faa’iido u leh lamaanah laakiin uuna noqon mid dhib u keenaya caafimaadkooda.
Hadaba Kulanka sariirta ah ee sida joogtada ah ee badan loo sameeyo saamayn intee leeg ayuu ku leeyahay caafimaadka jidhka lamaanaha.
Halkan kaga bogo jawaabta su’aashaas muhiimka ah:
Mararka qaar kulanka sariirta ee ka bad-badiska ah waxa ay u xuntahay caafimaadka jidhka waxana ay ku keeni kartaa dhibaato aad u badan labada qof ee is qaba laakiin waa goorma marka ay sidaas dhacayso?
Marka hore waa in aanu ogaano in samayn kulanka sariirta ee labada qof u sameeyaan maalinlaha ma odhan karno waa mid ka bad-badis ah sababta oo ah arintaas waxa u baahan jidhka inkasta oo ay Dadku u kala baahi badanyihiin laakiin waxa muhiim ah in rabitaanka kulanka sariirtu noqdo mid uu jidhku u baahanyahay laakiin ayna noqon mid aad u samayso dareeno kale sida Baqdin, in aad dareento kalinimo iyo wixii la mid ah.
Laakiin Hadii aad kulanka sariirta samayso adiga oo aan jidh ahaan u baahanyn waxa ay kugu keeni kartaa dhibaatooyin aad u badan waxana ka mid ah kuwa hoos ku xusan.
1.Cadaadiska, dareen iyo daal dhanka jidhka ah taas oo keenaysa in aanad awood u yeelan in aad qabato Shaqooyinkaaga caadiga ah.
2.In barar ku yimaado xubinta tartanka labada qof sidoo kale ay keento in ay qaadaan Infegshan iyo wixii la mid ah.
3.Xanuun daran oo ku yimaada xubinta tartanka labada qof ee is qaba.
4.In uu yaraado difaaca jidhka labada qof ee is qaba taas oo wadada u furaysa xanuunada kala duwan ee la qaado.
5.In ay Gabadha ka soo dhacaan caruurtu mar walba oo ay Uur yeelato.
6.In ay labada qof waayaan rabitaan iyo xiiso ay u qabaan kulanka sariirta.